PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-12-02 - Izibusiso amasheshi evula eyesonto
Izibusiso amasheshi evula eyesonto
Ilanga langeSonto - 2018-12-02 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
KUNUKE impepho kwahlokoma lonke ibandla lasest Andrews Anglican Church, eclermont, kuvulwa kabusha indlu yesonto evuselelwe ngezindleko ezingaphezu kuka-r1.5 million ngesonto eledlule.
Le ndlu, ebisineminyaka engaphezu kwamashumi ayisithupha yakhiwa, ivulwe ngokomthetho, yabusiswa ngumbhishobhi wamaSheshi Kwazulu-natal ubishop Dino Gabriel ephelezelwa ngumfu B Magwaza oliphethe nezinceku namagosa ebandla.
Umbhishobhi Gabriel, obephuphuma intokozo, ungene kule ndlu waqale wayizungeza ngaphakathi echela amakholwa ngamanzi angcwele, ebashunqisela ngempepho, maqede wayovula itshe elibhaliwe lesikhumbuzo ngaphandle waze wabusisa nezindlu ezincane.
“Ngiyaziqhenya ngani bazalwane basest Andrews ngomsebenzi omkhulu kangaka eniwenzile ngesikhathi esincane. Le ndlu zolo lokhu ibisesimeni esingesihle kodwa manje sengathi yiphupho ukuthi isiwubukhazikhazi obunje. Inkosi inibusise nonke,” kusho umbhishobhi Gabriel osithamundayo isizulu.
Ugosa, ongunkk Nomusa Mbambo (umakhumalo) utshele ibandla ukuthi yena wanikwa umsebenzi wokuvuselela indlu, abanye banikwa owokuvuselela izindlu ezincane nokunye.
“Kuke kwaba nzima endleleni, usathane elwa nomsebenzi kaNkulunkulu. Sike saba nesikhathi esinzima imali yokwakha isihlangene kepha, sesinenkinga yokuthi senza kuphi phakathi kokudiliza yonke indlu noma siyivuselele izindonga nengaphakathi sibe siqhubeka nokukhonza.
“Kodwa unkulunkulu emuhle sigcine sikwazile ukuyenza yaba yinhle kangaka. Sibonga ubuholi bomfundisi wethu nokubambisana okuhle ebandleni jikelele,” kubeka umakhumalo.
Izwi lethulwe ngu-archdeacon Forbes Maupa ofunde encwadini kadeuteronomy ekhuluma ngabantwana bakwa-israel behleli entabeni, sebenethezekile bengakafiki ezweni lesethembiso.
Ugqugquzele ibandla ukuba lingami kulokhu eselikwenzile licabange ukuthi umsebenzi usuphelile.
“Unkulunkulu uhlala endlini eyinhliziyo yomuntu. Umsebenzi wenu wukusebenzisa le ndlu ukwakha izindlu zikajehova azohlala kuzo okungabantu. Hambani manje nibafune abangakholwayo, le ndlu ibe yikhaya labo. Ukuthi naphenduka kuleya minyaka akusebenzi, seniwenzile umsebenzi wokuqala, qhubekani inkosi izonibusisa,” kushumayela udikoni Maupa.
Okuphawulekile kulo mcimbi ukuthi umsebenzi wokwakhiwa kwale ndlu ubuthwelwe ngabantu besifazane. Ubuhanjelwe ngabaholi bamabandla abehlukene nosolwazi.
UMBHISHOBHI Dino Gabriel nomfu B Magwaza (kwesokunxele) nabazalwane bebandla.